တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.: December 2008
တွေးမိတွေးရာ...... .ရေးမိရေးရာ စာများ.
တခါတလေတွေးမိတာတွေ တခါတလေ ခံစားမိတာတွေ စတဲ့ တခါတလေများရဲ့ စုစည်းမှု
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. တူမလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်ရင်း သည်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ပုံပြန်တွေ့လို့.. သားသားပုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး အမှတ်တရ တင်ထားချင်လို့ပါ။ တူမလေးက သူ့တုန်းက အကျီ င်္လေးကို သားသားဖို့ ဆိုပြီး ဟိုနေ့က လာပေးတယ်။ သူက အခု ၄ နှစ်ရှိနေပြီ။ သားသားကတော့ ၄ လပေါ့..။
အဲသည်အကျီ င်္လေးက သူ ၉လ ၁ နှစ်ဝန်းကျင်က ၀တ်တာကလေးလေ...။ ဒါက တူမလေး ပေါ့။
သူ့တုန်းက ၉လ-၁နှစ် ၀တ်ခဲ့တာလေးက အခု သားသား ၄ လမှာ အတော်ပဲဖြစ်နေတယ်။
နောက်ပြီး ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရင်း သူတို့ မောင်နှမ ၂ ယောက် ရုပ်ကလေးတွေ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ လို့တွေးမိသေးတယ်။း)
Posted by Maw at 6:12 PM 1 comments
သားက ဆံပင်သန်တယ်။ မွေးကတည်းက ဆံပင်တွေမည်းနေတာပဲ။ အရင်က တစ်ခါ ရိတ်ဖူးပြီးသားပါ။ ခုတော့ သားက ၄ လကျော်ပြီဆိုတော့ နည်းနည်း သိတတ်စပြုပြီလေ..။ ငယ်တုန်းကတော့ သူ့ခေါင်းရိတ်တာကို သိပ်ခံစားရပုံမပေါ်ဘူး။ ခုတော့ သူတော်တော်ခံစားရပုံပဲ..။ ငိုလိုက်တာ ၀က်ဝက်ကွဲ။ ငါ့ကို နှိပ်စက်နေကြတယ်လို့များ တွေးလေသည်လားမသိ... တကယ့်ကို ၀မ်းနည်းပက်လက်ပဲ။ ကြည့်ကြပါဦးတော်..။
အားလုံးပြီးလို့ သူ့ကိုမှန်သွားပြတော့ မဲ့မဲ့.. မဲ့မဲ့နဲ့လေ..။
တကယ်က ကတုံးရိတ်ဖို့အထိ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားဆံပင်တွေကရှည်နေတော့ .. သူက ကုတ်ကုတ်နေလို့.. နည်းနည်း ပါးလိုက်မယ်ဆိုပြီး ဆံပင်ပါးတဲ့ ဂျုတ်ဓားလေး Spirit ကသွားဝယ်လာတယ်။ မေမေက စမ်းသပ်လုပ်တယ်။ ဖေဖေက အားမရလို့ ကတ်ကြေးနဲ့လိုက်ညှပ်တယ်။ ပုံဆိုးပန်းဆိုးလေး ဖြစ်သွားတော့ ဘွားဘွားက ငါ့မြေးကို ဒီပုံစံကြီးနဲ့တော့ မထားဘူးအေ.. ရိတ်ရင်အပြောင်ရိတ်မယ် ဆိုပြီး ခေါင်းရိတ်တဲ့စခန်းကို ရောက်သွားတော့တာပါ။
Posted by Maw at 10:36 PM3comments
ရုံးမှာ တော်တော်အလုပ်များပါတယ်။ အရင်တုန်းကများရတဲ့အထဲ နာဂစ်အပြီးမှာ Delta ရုံးခွဲ ၃ ရုံးထပ်ဖွင့်ပြီး ပရောဂျက်တွေ ပိုများလာတာကြောင့် မလှုပ်နိုင်အောင်ကို အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ် မရေးဖြစ်တာကြာတာလဲ အဲဒါကြောင့်ပါပဲ။ နှစ်မကုန်မီ annual leave balance တွေဖြိုဖို့ ဒီဇင်ဘာ ပထမ ၂ ပတ်ခွင့်တင်ထားပေမယ့်.. Regional ရုံးက လာပေးမယ့် Relieving ခမျာ ထွက်လာမယ့်နေ့မှာပဲ ဘန်ကောက်လေဆိပ်က ပိတ်တော်မူသွားတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့.. လေဆိပ်ဖွင့်တဲ့ နေ့မှာ သူ့ဗီဇာက ကုန်သွားပြီဖြစ်လို့ အသစ်ပြန်လျှောက်ရပြန်ပါတယ်။ အစကတော့ ဒီရောက်မှ အိတ်စတန်းလုပ်ဖို့ပဲ.. နောက် လေဆိပ်ပိတ်သွားလိုက်တာ သူ့ဗီဇာကုန်တာနဲ့ သွားတိုက်၊ အစကပြန်လျှောက် ပြန်ကြာနဲ့.. ဒီနေ့မှ သူရောက်လာနိုင်တယ်။ သည်တော့ နောက်တစ်ပတ် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ အလုပ်လွှဲပြီးသွားရင် ခွင့်သွားရတော့မှာဆိုတော့.. စိတ်လက် နည်းနည်းပေါ့ပါးနေတယ်။ တန်းလန်းတချို့ဖြတ်ပြီးရင် အားလုံးသူ့ဆီလွှဲခဲ့တော့မှာဆိုတော့ပေ့ါလေ..။ ထားပါတော့.. အဲဒါက။ အဲ.. ပြောချင်တာက အလုပ်တွေ အရမ်းများတဲ့အထဲမှာ ရုံးက တစ်ယောက်က အင်္ဂါနေ့က စကားလာစတယ်.. ထမင်းစားချိန်မှာပေါ့..
မော်မော်ရယ် မသီလေ..တစ်ခုလောက်တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ..။ ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက် စာအုပ်စင်ရှင်းလိုက်တာ.. စာအုပ်တစ်အုပ်ပြန်တွေ့တယ်။ သိလား။ အဲသည်စာအုပ်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက ငှားထားတာ..။ ခုမှ ပြန်မပေးရသေးတာသိတယ်။ အဲသည်သူငယ်ချင်းကလဲ စာအုပ်တွေ အရမ်းတန်ဖိုးထားတာ။ မသီ ပြန်လဲ ပေးချင်တယ်။ ပေးရင်လဲ စိတ်ဆိုးမှာ ကြောက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ တဲ့။
အဲဒါများ မသီရယ်။ ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့..။
ပေးလိုက်မှ စိတ်အရမ်းဆိုးသွားမှာကြောက်လို့.. တဲ့။
ပြန်ပေးလိုက်ပါမသီရယ်.. ။သူလဲ မမှတ်မိလို့ပြန်မတောင်းတာပေါ့။ သိပ်ကြီးစိတ်ဆိုးတော့မယ် မထင်ပါဘူး..။ ဆိုပြီးစကားစပ်ပြတ်သွားပါတယ်။
နောက်တစ်ရက်... ။ ကိုယ်နဲ့ ပရိုဂရမ်အရာရှိတစ်ယောက်နဲ့ .. ဘတ်ဂျက်တစ်ခု ထိုင်ဆွဲနေကြတုန်း လာပြန်တယ်။ မအေးသန်းရော မော်မော်ရောကိုလေ.. အကြံဥာဏ်လေးတောင်းချင်လို့.. ဆိုပြီး အဲသည်ကိစ်စပဲ ထပ်ပြောပြန်တယ်။ အလုပ်ကလဲ ရှုပ်နေရာကနေ.. မသီရယ်.. ဘာလို့ ဒီကိစ်စကို ဒီလောက် ဦးနှောက်ခြောက်နေရတာလဲ..။ ပေးစရာရှိတာ ပြန်ပေးလိုက်..။ မပေးချင်လဲ မေ့လက်စနဲ့ မေ့ထားလိုက်တော့.. ။ ဦးနှောက်ထဲ ထည့်မနေနဲ့.. လို့ ပြောလိုက်တယ်။
မပေးဘဲ ထားရရင် လဲ လိပ်ပြာသန့်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး .. ။ပေးလိုက်ပြန်ရင်လဲ စိတ်ဆိုးဦးမယ်။ အဲလိုစာအု့ပ်မျိုး အသစ်ဝယ်ပြီး လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ရမလားဟင် တဲ့..။
ကိုယ်က အလုပ်ကလဲ တော်တော်ရှုပ်တော့.. မသီရယ်.. အဲဒါဘာအရေးကြီးလို့လဲ..။ ဒီမှာ တအားရှုပ်နေတဲ့ဟာကို ပြန်မပေးချင်လဲ မပေးနဲ့တော့...ထားလိုက်တော့.. သွားပါတော့ကွာ..ဒီမှာရှုပ်နေတယ်... ဆိုတော့.. သူထွက်သွားတယ်။ ဒါကတစ်ရက်။
နောက် မနေ့က (သောကြာနေ့ပေါ့) ကော်ဖီသောက်ရင်း သူ့စားပွဲနားရပ်နေတုန်း တစ်ခါ မေးပြန်တယ်။ အဲသည်ကိစ်စ။ ကိုယ်ကလဲ သူ့ကို စိတ်ကလဲ တို သနားလဲ သနားနေပြီ။ ဒါကြောင့်လဲ အပျိုကြီးဖြစ်တာနေမှာ လို့လဲ ကောက်ချက်ချမိရင်း . .. စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြမိတယ်... မသီရယ်.. လူဆိုတာ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အရာတွေလဲ ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ ပြန်သာပေးလိုက်ပါ။ ဟိုးတုန်းကအနေနဲ့သာ စိတ်ဆိုးရင် စိတ်ဆိုးမယ်။ ခုလောက်ရှိ သိပ်စိတ်ဆိုးတော့မယ် မထင်ပါဘူး လို့..။ အဲသည်တော့.. မော်မော် ဆိုရင်ကော. .တဲ့။
ကျွန်မဆိုရင်တော့ မသီရယ်.. ဟိုတုန်းကတော့ တစ်မျိုးပေါ့။ တန်ဖိုးထားတဲ့စာအုပ်တွေ ပျောက်ပေါင်းကလဲ များပြီ။ ခုဆို အလုပ်ကတစ်ဖက်၊ အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးက တစ်ဖတ်၊ အလုပ်ကပြန်ရောက်ရင် စာအုပ်တွေ လှည့်ကြည့်ဖို့နေနေသာသာ.. ကလေးနဲ့ နေလို့တောင်မ၀ဘူး။ စာအုပ်စင်က ဘာစာတွေပျောက်လို့..ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းလဲ သိတော့တာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်လဲ ဆိုးဖြစ်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။ လို့ ပြောတော့မှ.. အဲသည် မသီဆိုတဲ့ ပြား ၁၀၀ မပြည့်တပြည့် အပျိုကြီးက... အမလေး ခုလိုကြားရတာ ၀မ်းသာလိုက်တာ မော်မော်ရယ်.. မသီပြောနေတဲ့ စာအုပ်က မော်မော့်စာအုပ်... တဲ့..။ ခုမှ ပဲ အသက်ရှူ ချောင်သွားတော့တယ်တဲ့...။
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ.. မသီရယ် လို့..ပဲ ပြောနိုင်တော့တယ်။ အေးလေ... စိတ်လဲ ဆိုးလို့ မှ မရတော့တာ.. ။ သူက ချည်ပြီးတုပ်ပြီးကိုး။
အင်း.... သူက ပြား၁၀၀ ပြည့်ရုံမက ၅ မတ် လူစားမျိုး.. ၅ မတ်လူစားမျိုး.. လို့ပဲ ကောက်ချက်ချမိတော့တယ်...။
Posted by Maw at 12:18 AM0comments
ကိုယ့်ယောက်ျားအကြောင်းလေးတွေ ရေးမှာမို့လို့.. ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရဲ့ စကားလေး ငှားသုံးပါတယ်။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးကိုတော့.. ယောက်ျားတော်ကြောင်းတွေ ကြွားတယ်လို့တော့ သူငယ်ချင်းအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က ဝေဖန်ဖူးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ တော်ကြောင်းကြွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. သူ့ရဲ့ အချို့အချို့သောထူးခြားတဲ့ အမူအကျင့်အချို့ အကြာင်းများရေးမလို့ပါ။
ယောက်ျားနှင့် သူ၏ အကျီ င်္များ
ကိုယ့်ယောက်ျားရဲ့ ဗီဒိုရှင်းရင်းနဲ့ အေ၇ာင်တူ၊ တံဆိပ်တူ၊ ဆိုဒ်တူ အကျီ င်္တွေ ၄ ထည်လောက်တွေ့ပါတယ်။ ဂျော်ဒန်းနိုး ခပ်ညစ်ညစ် ရှပ်လက်တိုတွေပါ။ တော်တော်ကြိုက်ပုံရပါတယ်။ အဟောင်းလေး ၂ ထည်က ဂုတ်တွေစုတ်နေပြီ။ တစ်မျိုးတည်းကို ၂ထည် ၃ ထည်တစ်ပြိုင်တည်းဝယ်ထားတာမျိုးပါ။ မေးကြည့်တော့ ကြိုက်လို့တဲ့။
ဟိုနေ့ကပဲ နောက်ထပ် တစ်ထည် ထပ်ဝယ်လာသေးတယ်။ ဒီအရောင်၊ ဒီတံဆိပ်၊ ဒီရှပ်လက်တိုပါပဲ။ တွေးနေမိတယ်။ ကိုယ့်မှာ အမွှာညီမများရှိရင် .. အကျီ င်္တွေလိုမျို တစ်လက်စတည်း ဟောင်းသွားရင် နောက်တစ်ထည် အသင့်ရှိအောင် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ယူထားလေဦးမလား မသိ..။ ခွိခွိ
Posted by Maw at 10:14 PM 1 comments
ရန်ကုန်, Myanmar (Burma)
အသက် ၃၃နှစ်၊ ကြသပတေးသမီး။ စနေသား ခင်ပွန်းသည်နှင့် ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ဗုဓ်ဟူးသား သားကလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ။
တွေးမိတွေးရော ရေးမိရေးရာ များ (ရက်စွဲအလိုက်)
တို့မိသားစု - ကျောက်မောင်နှမ မှာ
၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီလ ကွန်ပြူတာအသင်းမိသားစုနှင့်အတူ သွားခဲ့တဲ့ချောင်းသာခရီးစဉ်အမှတ်တရ
တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာများ (ကဏ္ဍအလိုက်)
ခံစားမိသမျွ ဆရာမ ဂျူး၏ စာများ (17)
ကျွန်မနှင့် အချစ် (8)
ဖတ်မိဖတ်ရာ ထိုထိုစာ (7)
ကြုံရ ဆုံရ နေ့စဉ်ဘ၀ (6)
ကျွန်မ နှင့် ဘာသာတရား (1)
စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း (1)
Download WinKalaw Font
လောလောဆယ်ဆယ်.. အလုပ်ကို ပျင်းမုန်းငြီးငွေ့လွန်းလှတာကြောင့် အသစ်တစ်ခုခု ပြောင်းလုပ်ချင်တယ်။ ၀န်းကျင်သစ် နေရာသစ် အလုပ်သစ်၊ အသစ်ကိုတောင့်တပါတယ်။း(
သူငယ်ချင်းများ ရဲ့ ဘလော့ဂ်လိပ်စာ
ဇူလိုင်လတွင်သာ ဇူလိုင်အိပ်မက်မက်သော ကောင်ကလေး
ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ.. ၀ီကီ